आज मध्यरातबाट यी तिन राशिमा शनि ग्रहको कृपा दृस्टी रहने ! असिमित आर्थिक लाभ मिल्ने ! « Online Tv Nepal
आज मध्यरातबाट यी तिन राशिमा शनि ग्रहको कृपा दृस्टी रहने ! असिमित आर्थिक लाभ मिल्ने !
Published :5June, 2018 5:51 pm
ज्योतिष शास्त्रमा शनिलाई कर्मफल दाता मान्ने गरिन्छ। ग्रहहरुले फरक-फरक समयमा नक्षत्र परिवर्तन गरि रहेकै हुन्छ। जसका कारण फरक-फरक राशिमा भिन्न प्रकारको असर देखाउने हुन्छ। आजको रात पछि निम्न उल्लेखित राशीहरुमा शनि ग्रहको शुभ छाया रहने छ। जसका कारण नराम्रो चली रहेको समय समेत लाभदायक समयमा परिवर्तित हुने गर्छ।
यस राशी हुनेहरुको लागि हरेक क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ला भने यात्रा पनि सुनिचित हुने समय रहने देखिन्छ। शारीरिक र मानसिक रुपमा भएका सम्पूर्ण दुर्वलता हटेर जानेछ। टाढा रहेका आफन्तजनसँग भेट गर्ने अवसर जुट्न सक्ला भने विदेशबाट शुभ समाचार समेत प्राप्त हुन सक्ला। आर्थिक मामलामा पनि सवल बन्ने मौका मिल्न सक्ला।
यस राशी हुनेहरुको लागि सामाजिक रुपमा मान-सम्मान मिल्न सक्ला। जागिरमा उच्च अधिकारीहरुलाई खुशी बनाउने कार्यमा सफल मिल्न सक्ला। जसका कारण पद्दोंनतिको समेत योग रहने छ। अचानक धन प्राप्ति हुनाले आर्थिक दुर्वलता हटेर जान सक्ला। आर्थिक मामलाको लागि हुने तारमा सफलता हात लग्न सक्ला। धार्मिक कार्यमा भने खर्च हुन सक्ला।
यस राशी हुनेहरुको लागि पनि समय शुभ रहनेछ। विशेषतः प्रेम सम्बन्धले नयाँ रुप पाउनेछ भने पारिवारिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउन सक्ला। परिवारको खुशीको लागि खर्च बढ्ने भएता पनि नयाँ रोजगारीको अवसर र यात्राको योग बन्न सक्ला। आर्थिक मामलामा राजनीति जोडिने हुँदा पनि लाभनै मिल्ने देखिन्छ। अध्ययनमा पनि सुधार देखा पर्न सक्ला।